Yakasarudzika Vakadzi Cowsuede Clog Slipper Yakakwira Hwakanaka Nyaradzo Footbed - Goodao Technology Co, Ltd.
Yakasarudzika Vakadzi Cowsuede Clog Slipper Yakakwira Hwakanaka Nyaradzo Footbed
Muenzaniso NO.: BLM0411B
Mwaka: Autumn, Chitubu, Nguva yechando
Saizi: Vakadzi Us6-11 #
HS Kodhi: 6403990090
Iyi Clark yevakadzi imba inotsvedza ndeye yakakosha yekuwedzera kune yako wadhiropu! Izvo zvakapfava zvinhu zvinopa kudziya uye nyaradzo, nepo rakasimba rabha outsole ichibvumidza mwenje wekunze kupfeka. Aya slippers zvakare anoita zvipo zvikuru! Aya maslippers anomhanya zvishoma. Tinokurudzira kuodha saizi kumusoro, kunyanya kana uri hafu saizi kana uine hupamhi tsoka.
● Ultra Soft faux Fur Lining inochengetedza tsoka dzako kudziya uye kugadzikana.
● Imba inotsvedza, yakakodzera kubikira mukicheni, kutamba nevana vako, kunwa tii yemasikati muchivanze, kufamba uchienda kubhokisi retsamba, kutora marara, kudiridza uswa, kufamba nembwa, kana kuenda kunosaina mapasuru. Chipo chikuru kupuruzira tsoka dzako dzakaneta nekuzorora kwakakodzera.
● Yakagadzirwa neyakareba, yakabatwa chete kudzivirira kutsvedza kana kutsvedza kana wakapfeka shangu idzi mukati kana kunze.
● Izvi zvinogadzira chipo chakakura! Ipa shamwari dzinoshanda nesimba uye mhuri yakanaka peippy sezvipo zvekuzorodza tsoka dzakaneta.
● Aya maslippers anomhanya zvishoma. Tinokurudzira kuodha saizi kumusoro, kunyanya kana uri hafu saizi kana uine hupamhi tsoka.
● Isu takagadzira akasiyana lining zvinhu eiyi dhizaini.
● Shongedza bhatani uye musono mutsara.
Kubhadhara T / T, L / C PAKUONA
Fekitori yedu ine ruzivo rwakanaka kuburitsa Mombe-suede moccasin uye inotsvedza. Uye isu tine kwenguva yakareba Co-oparesheni zvinhu vatengesi, Ivo vane hunyanzvi munzvimbo yavo, kudzora mhando uye neyakagadzikana chinzvimbo futi. Isu tinosimbisa zvigadzirwa zvedu zvinogona kusangana neCA 65 Kuedzwa uye neAZO uye Chrome VI yemahara. Isu tinotenda tichienzanisa nemutengo wakaderera, Hunhu hwakanaka uye zvinhu zvehutano zvakakosha zvakanyanya kumutengi. Zvizhinji zvezvigadzirwa zvine zvigadzirwa zvekutengesa muUK neUSA; isu tine chikwereti chedu dhizaini dhizaini uye Chikwata, chinogona kukubatsira iwe kukudziridza shangu sekukumbira kwako kuita yako kugadzirwa kuve yakakosha nezvimwe. Uye isu tinogona kuraira edu ehunyanzvi zano ekugadzirwa uye zvinhu kusarudza hwaro pane edu ruzivo.
Pashure: Yakasarudzika Dhizaini yeChina Nyowani 2020 Yakakwira Hunhu Kutyaira Shangu Dzakagadzirwa nemaoko Mens Casual Shoes
Zvadaro: Vatsva Vanosvika Fashoni Inodziya Nguva Yechando Yakasarudzika Yechokwadi Leather Loafers Moccasins Bhutsu Kune Vakadzi
Pairi rimwe chete muPolish, gumi nemaviri / 18/24 mune rimwe bhokisi
Clog Chimiro Slippers
Akanzwa Clog Slippers
Shearling Clog Slippers
New Vanosvika Fashoni Warm Yemuchando Casual Chaiye ...
Yevakadzi Inodziya Faux Fur Thong Slipper
vakadzi / Vasikana Fairy chando Knit Slippers ...
Mapfupi ebhutsu ane Micro Suede yepamusoro uye Faux F ...
Vakakurumbira Varume Cowsuede Venetian Slipper Moccasin I ...